Daawo: Jaaliyadda jubbaland ee UK oo magaalada london si diiran ugu soo dhaweeyay madaxweyne axmad madoobe | Kismaayo24 News Agency
Daawo: Jaaliyadda jubbaland ee UK oo magaalada london si diiran ugu soo dhaweeyay madaxweyne axmad madoobe
Wednesday May 10, 2017 - 9:47 under Somali News by Tifaftiraha K24
Madaxweynaha dowlad goboleedka soomaliyeed ee jubbaland axmad maxamad islaam axmad madoobe oo xalay gaaray magaalada london ayaa waxaa si diiran usoo dhaweeyay jaaliyadda soomaliyeed ee jubbaland.
Madaxweyne axmad madoobe iyo wafdigiisa waxaa garoonka kusoo dhaweeyay shacab badan oo reer jubbaland ah kuwaasi oo wata sawirka madaxweynaha iyo weliba calamada jubbaland iyo calanka jamhuuriyadda soomalia.
Jaaliyadda Jubaland ee UK ayaa si diiran usoo dhaweyn ay madaxweynaha iyo wafdigiisi.Waxaa sidoo kale soo dhaweynta ka qeyb qaaday wasiiro,xildhibaano iyo masuuliyiin kale oo horay ugu si sugnaa magaalada London.
Madaxweynaha jubbaland ayaa uga mahad celiyay jaaliyadda jubbaland ee sida diiran ugu soo dhaweysay london wuxuuna sheegay in ay tahay wax aad loogu farxo in dadka intaa la eg ay garoonka kugu soo dhaweeyaan.
Axmad madoobe ayaa si kooban uga hadlay shirka beri ka furmi doona magaalada london wuxuuna sheegay in markaan ay beesha caalamka si toos ah ugala hadli doonaan iney wax muuqda u qabtaan Soomaaliya, kana dhabeeyaan balanqaadkooda.
“Waxaan rajeynayaa in shirkaan uu noqon doono mid ka duwanaan doono kuwii hore ee Soomaalida dibadaha loogu qaban jiray, annaga Soomaalidii ahna aan ka fikireyno in wax maamuus ah oo la taaban karo shirka la tagno, qolyaha shirka qabanaya ee UK ugu horreysana aan rabno inaan niraahno war qaan hana saarina waxqabad dhab ah inoo sheega, ka qaad oo u qaad yaanay nagu noqon, waxaad inoo balanqaadaanna nasiiya” ayuu yiri madaxweyne axmad madoobe.
Halkaan ka daawo muuqaalka soo dhaweynta madaxweynaha